ချာအွန်းဝူ ဟု အများကသိကြသည့် လီဒုံမင်း သည် တောင်ကိုရီးယား အဆိုတော်၊ သရုပ်ဆောင်နှင့် Fantagio မှ မော်ဒယ်တစ်ဦးဖြစ်သည်။ တောင်ကိုရီးယား အမျိုးသားတေးဂီတအဖွဲ့ Astro မှ အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးလည်းဖြစ်သည်။
ချာအွန်းဝူကို ၁၉၉၇ခုနှစ် မတ်လ ၃၀ရက်နေ့တွင် ဂယောင်းဂီပြည်နယ်၊ ဂွန်ဖိုမြို့၌ မွေးဖွားသည်။ ဆူရီ အလယ်တန်းနှင့် အထက်တန်းကျောင်းတွင် ပညာသင်ကြားခဲ့ပြီး၊ ၂၀၁၆တွင် ဟန်းလင်အနုပညာကျောင်းမှ အထက်တန်းအောင်သည်။ လက်ရှိတွင် ဆောင်းဂယွန်းဂွမ်တက္ကသိုလ်၌ သရုပ်ဆောင်ပညာ သင်ယူလျက်ရှိသည်။
2.1. အနုပညာခရီး ၂၀၁၃–၂၀၁၅၊ အစ
My Brilliant Life ဇာတ်ကားတွင် ဇာတ်ရန်နေရာက သရုပ်ဆောင်ကာ အနုပညာလောကသို့ စတင်ဝင်ရောက်လာခဲ့သည်။
၂၀၁၅တွင် သူ၏အဖွဲ့တူသူငယ်ချင်းများနှင့်အတူ ဆက်ရန်ရှိသေးသည် ဝဘ်ဒရာမာတွင် ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။
2.2. အနုပညာခရီး ၂၀၁၆–လက်ရှိ၊ Astro ပွဲဦးထွက်၊ တစ်ကိုယ်တော်လှုပ်ရှားမှု၊ နာမည်ကြီးလာခြင်း
Astro အဖွဲ့သည် ၂၀၁၆ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၃တွင် Spring Up အမည်ရ မီနီအယ်လ်ဘမ်ဖြင့် ပွဲဦးထွက်သည်။ ၎င်းနှစ် ဩဂုတ်လ၌ ချာအွန်းဝူသည် ချူဆော့ ကောက်သစ်စားပွဲတော် အထူးရသစုံအစီအစဉ် Replies That Make Us Flutter တွင် ပါဝင်ခဲ့သည်။ စက်တင်ဘာလတွင် Boomshakalaka အစီအစဉ်၌လည်း ပါဝင်ခဲ့သေးသည်။
ထို့နောက် ဂင်ဆယ်ရွန်၊ လီဆူမင်းတို့နှင့်အတူ ၂၀၁၆မှ ၂၀၁၈ထိ ထုတ်လွှင့်ခဲ့သည့် Show! Music Core တွင် အစီအစဉ်တင်ဆက်သူအဖြစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ထိုနှစ်၌ပင် ဝဘ်ဒရာမာ My Romantic Some Recipe တွင် ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။
၂၀၁၇တွင် ချာအွန်းဝူသည် ကေဘီအက်စ် ၂ က ထုတ်လွှင့်သည့် Hit the Top ဒရာမာ၌ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ထိုနှစ်ထဲမှာပင် Sweet Revenge ဝဘ်ဒရာမာတွင် ပါဝင်ခဲ့သည်။
၂၀၁၈၌ ဝဘ်ဒရာမာ Top Management တွင် ပါဝင်ခဲ့သည်။ ၎င်းနှစ်၌ပင် သူ၏ ပထမဆုံး ခေါင်းဆောင်မင်းသားနေရာအဖြစ် JTBC က ထုတ်လွှင့်သည့် Gangnam Beauty ဇာတ်လမ်းတွဲတွင် သရုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ ဇာတ်လမ်းတွဲမှတစ်ဆင့် ချာအွန်းဝူသည် ရေပန်းစားလာပြီး၊ GQ Korea ၏ Men of the Year စာရင်းတွင် ပါဝင်လာခဲ့သည်။
ချာအွန်းဝူသည် ၂၀၁၉တွင် ရှင်းဆယ်ဂယောင်းနှင့်အတူ ရာဇဝင်ကား Rookie Historian Goo Hae-ryung ၌ တွဲဖက်သရုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၉ အမ်ဘီစီ ဒရာမာ ဆုပေးပွဲ၌ ချာအွန်းဝူသည် အကောင်းဆုံး အမျိုးသားသရုပ်ဆောင်ဆု၊ ရှင်းဆယ်ဂယောင်းနှင့်အတူ အကောင်းဆုံး စုံတွဲဆုတို့ကို ရရှိခဲ့သည်။
၂၀၁၉ ဇူလိုင်လတွင် ချာအွန်းဝူက "Just One 10 Minute" ဟု နာမည်ပေးထားသည့် သူ၏ ပထမဆုံး အာရှတစ်လွှား ပရိသတ် တွေ့ဆုံပွဲကို အောက်တိုဘာလ၌ ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း ကြေညာခဲ့သည်။ ၂၀၁၉ ဒီဇင်ဘာတွင် ဂျိုအီ၊ လီဆန်ယွန်း၊ ယူဆောနို၊ ဆောဂျန်ဟွန်းတို့နှင့်အတူ ရသစုံအစီအစဉ်သစ် Handsome Tigers ၌ ပါဝင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ကြေညာခဲ့သည်။ ကေပေါ့ပ်ရေဒါ နှစ်ချုပ်ဇယား K-pop Radar Year-End Chart၌ ချာအွန်းဝူသည် "2019 Hot Instagrammer - Male" အဖြစ် သတ်မှတ်ခံရသည်။
၂၀၂၀ ဧပြီတွင် Master in the House အစီအစဉ်၌ ပါဝင်ခဲ့သည်။
၂၀၂၀ နှစ်ကုန်ပိုင်း၌ tvN ဇာတ်လမ်းတွဲ စစ်မှန်သောအလှတရားတွင် စာတော်ပြီး ခပ်ချေချေနေတတ်သည့် အဓိကဇာတ်ဆောင် လီဆူဟိုအဖြစ် သရုပ်ဆောင်မည်ဖြစ်သည်။